Ịchọta Onwa-Page SEO Iji Nye Mkpụrụ Ọrụ Gị na Ntanetị - Nnyocha Site na Ọka Mmiri
Maka azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị, ịnweta ezigbo mkpuchi karịsịa na ịntanetị bụ isi. Maka internet internet marketer, idebe ike dị na ntanetị dịka ihe nchọgharị na ntanetị mgbasa ozi na-abụkarị ihe mgbaru ọsọ bụ isi. Nke a bụ ebe Search Engine njikarịcha na-abịa. Ihe mgbaru ọsọ nke ọ bụla SEO bụ ịzụlite okporo ụzọ maka ụlọ ọrụ ịntanetị gị site na ịdebanye ọkwa kachasị elu na SERP ziri ezi nke ụfọdụ mkpụrụ okwu kpọmkwem - dekostoff pirat. Na nke a, elu nke saịtị gị gosipụtara, ndị mmadụ na-enyocha mkpụrụ okwu ndị a nwere ike pịa ibe gị.
On-Page SEO na-enyere akwụkwọ aka inweta ikike na nyocha ọchụchọ site na akụkụ dịka nhọrọ isiokwu na ihe okike. Obe weebụ nke gosipụtara na mbụ nwere 99% ohere ịnweta ọtụtụ pịa, karịsịa mgbe ọdịnaya dị mkpa. Otú ọ dị, ime nke a adịghị mfe.
Lisa Mitchell, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Ọcha , akọwa ụzọ dị iche iche na otu ị ga - esi ebuli ibe gị SEO:
Nhọrọ okwu ọnụ
Dịka ihe ịma aka SEO ọ bụla ọzọ, ọrụ bụ isi na-achọta okwu mkparị na-asọmpi.Ngwa ndị dị ka Google AdWords na SEMrush nwere ike inyere gị aka ịchọta isiokwu ndị nwere asọmpi na-adịghị ike. Keywords dị mkpa iji mee iheọdịnaya weebụ. N'ebe a, echiche ahụ bụ na mgbe ị na-agụnye mkpụrụ okwu n'ime ọdịnaya weebụ gị, Google na-agụnye bots na-edekọ ọdịnaya gị na yapụtara na nsonaazụ ọchụchọ Google mgbe ọzọ mmadụ pịa na njikọ gị..Ebumnuche dị mkpa ka ọ dị maka akụkụ ụfọdụ nke aibe weebụ iji nweta CTR a. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mkpa itinye isiokwu dị na isiokwu aha, nkọwa nkọwa dịka yana ibeọdịnaya ya. AdWords nwere njirimara nke na-egosi gị nhazi usoro na nhazi nhazi nke arụmọrụ nke isiokwu gị.
ọdịnaya kwesịrị ịba uru na niche ị na-ezubere. E kwesịrị bụrụ ebe kwesịrị ekwesị nke isiokwu dị na peeji ahụ. Ihe ọdịnaya kwesịrị ịdị ogologo, dabere na nlele desktọọpụ ma ọ bụ anya igwe.Gbaa mbọ hụ na ị gaghị enwe ọdịnaya dị na peeji nke ị na-achọpụta. Ntughari ọdịnaya na-ewebata ọtụtụ URL, ibelata peeji nke ikike nakwa ogo.
Nhazi nke ibe
Maka Google ka ọ kwadoro ibe, ọ ghaghị imeghachi omume, mobile enyi na enyiọdịnaya dị mkpa. Google algorithm akwukwo akwukwo site na obum n'uche na ahuhu. Ị kwesịrị ịmepụta ibe weebụ nke na-etinye onye ọrụ maka oge ụfọdụ, ọ dị mfe iji ya na onye nwere ọsọ ngwa ngwa ngwa ngwa. Tinyere ụfọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi yana vidio nwere ike ịbụ ihe ọzọuru.
Maka ntanetị ọ bụla, ụfọdụ ahịa dijitalụ dị mkpa.Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbaso usoro SEO ma nwee ihe ịga nke ọma n'ime ka ọtụtụ ndị ahịa ghara ịdị mfe na ibe SEO na ọrụ ntanetịime weebụ. Iji nwee ihe ịga nke ọmaonline, ụfọdụ ihe dị oké mkpa na peeji nke SEO ihe dị mkpa ijikọta ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ nwere ike ịmegharị usoro okporo ụzọ site na isiokwu ahụnhọrọ dịka nke a na-eritekwa uru site na nnukwu mgbanwe ntọghata nke mgbasa ozi SEO na-aga nke ọma. Mgbe ị na-eji ntụziaka dị n'elu, gị onlineahia pụrụ ịmị mkpụrụ. Atụmatụ ndị a abụghị naanị maka inweta ọtụtụ ndị nleta mana ha na-ekerekwa òkè n'ọgbọ ọgbọ dị ka ịtụgharị ndị ọbịa na ndị na-azụ ahịa.